Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2752 - 2753 | XperimentalHamid
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2752 - 2753
Kwangathi 8, 2021 by I-Hisam Ullah
Funda Isahluko 2752 - 2753 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
UMelba wazizwa enamahloni futhi ethukuthele lapho ezwa lokhu.
Enamahloni, uCharlie wayenamahloni ngokwanele ukuba amthengele izingubo zakhe, futhi manje wabuza ngalokhu ngqo ubuso nobuso, okwamenza waba namahloni.
Okucasulayo, uCharlie, yini le ayithengayo! Kuphakathi kokuthi beyiveza ngokweqile, noma bekungenakwenzeka ukuyigqoka nhlobo. Manje njengoba ibhande ngemuva komzimba oselilenga emzimbeni, kuzizwa kungakhululekile futhi kungabekezeleleki.
Kodwa-ke, uMelba wayazi futhi ukuthi lawa kwakungamaphutha angahlosile kaCharlie. Noma ebethukuthele enhliziyweni yakhe, ubengamthukutheli, ingasaphathwa eyokuthi usindise impilo yakhe futhi ungumsindisi wakhe.
Ngakho-ke, wayekwazi ukuluma kuphela inhlamvu bese ethi: “Lokho… lokho… kulungile…”
UCharlie ubuze enganakile, “Uqinisekile ukuthi kulungile? Ingabe wonke awele phansi? ”
UMelba wayenamahloni kakhulu, ngasikhathi sinye wabuza ngokumangala: “Wena… wazi kanjani…”
UCharlie uxolisile wathi: “Akunjalo ngempela. Ngayithenga ngingacabanganga. Bekufanele ngilethe ezinkulu kodwa ngithenge ezincane …… “
UMelba waphenduka waba bomvu, wayengafuni ukuqhubeka nokuxoxa ngalesi sihloko noCharlie.
UCharlie wakhipha izingubo ezingaphansi kwezingu -3 ayesanda kuzithenga ephaketheni lakhe ngalesi sikhathi. Wayefuna ukuhamba amnikeze yena, kodwa wezwa ukuthi kungaba yinto exakile ukubamba lezi zingubo zangaphansi uzibhekise kwabanye ngqo, ngakho wazibeka etafuleni lesidlo. Esukuma phambi kwakhe, wathi ngendlela enamahloni: “Lokhu ukuthenga okusha. Ngayithenga ngamabomu osayizi ababili abakhulu. Ungathanda ukuya endlini yangasese uyishintshe manje? ”
UMelba akazange aphuphe ukuthi uCharlie angaze ayithole ephaketheni lakhe wakhipha esinye isicucu sangaphansi sangaphansi!
Futhi okwamumangaza nakakhulu ukuthi le ngubo engaphansi kwengu-3 kuvele kwaba wuphawu alubona ngesikhathi esemotweni!
“Lokho kusho ukuthi uCharlie uthe kunokuthile okumele akwenze, kodwa empeleni wangithengela izimpahla ezingaphansi kwezingu-3? Imicabango yakhe yaqondana nami… ”
Ecabanga ngalokhu, uMelba wasuswa ngokuzumayo.
Wayengalindelanga ukuthi uCharlie acabangele kangaka.
Ngalesi sikhathi, wayenamahloni ngempela, futhi ngokushesha wabamba ingubo yangaphansi engagqokiwe uCharlie ayidudula, wasukuma, waxubha futhi
wathi, “Ngiyabonga, Mnu. Wade…” Emva kokukhuluma, waphuthuma ebhokisini. Endlini yokugezela.
Ukhumule ingubo yangaphansi engaphansi kuka -3 ebinosayizi ongafanele kakhulu ngejubane elisheshayo, futhi amamaki amajoyinti ngemuva abebonakala kakhulu.
Akakwazanga ukulinda ukuphonsa lezi zingubo ezingaphansi kuka-troti, kodwa kwavele kwafika umcabango emqondweni wakhe, okwamenza wabona ukuthi lokhu kwakuyizimpahla zokuqala ezingaphansi kuka-3 uCharlie amnike zona kanye nezokuqala azitholile empilweni yakhe. Ucezu lwezingubo ezingaphansi kwezingu-3 ezinikezwe owesilisa.
Ngakho-ke, wagoqa lezi zingubo ezingaphansi kwezingubo ngendlela embi futhi wazithatha ngokuthula.
Ngemuva kwalokho, wakhipha esanda kuthengwa nguCharlie. Ngalesi sikhathi, ubukhulu bebufanele impela, obumenze waphefumula ngokukhululeka.
Umuzwa ngaphambili wawufana nosayizi onyawo lwama-40, kepha ukuhamba usuku lonke ngosayizi wezicathulo ezingama-35.
Ekugcineni sekujwayelekile manje.
Ngemuva kwemizuzu embalwa, lapho ephuma endlini yokugezela, wonke umuntu wayesesimeni esiphelele.
Ngaphambi kwalokhu, ubekade eqaphe kakhulu, engazange alinge ukwenza noma yini enkulu, futhi imizwa yakhe ibimbi kakhulu.
Kepha manje, usayizi walezi zingubo ezingaphansi kuka-3 ezithengiwe nguCharlie ulunge kakhulu. Ngemuva kokuyiguqula, yonke imizwa engemihle nemizwelo isulwa ngokushesha, kuyenza ibe lula kakhulu.
Ngemuva kokuphuma, wahlanganisa izingubo zakhe ezazishintshile ngezandla ngemuva, ngokwesaba ukubonwa uCharlie.
Lokhu ikakhulukazi kungenxa yokuthi ingubo kaChanel ayithengelwe uCharlie yayingenasikhwama, ngakho-ke wayengazi ukuthi uzoyibekaphi le ngubo, ukuze akwazi ukuyithwala emhlane kuphela.
Ebona uCharlie, uMelba wathi ngokujabha: “Mnu. Wade… ngiyabonga kakhulu… ”
UCharlie wamoyizela kancane futhi washo ngokungathi sína: “Kulungile, ngabe kufanelekile manje?”
UMelba uhlazekile wavuma ngekhanda.
Okwamanje izingubo ezingaphansi kwezingu -3 zilingana kahle.
Kepha akazange abe namahloni okukusho ngqo.
Ngenxa yalokhu, wayekwazi ukwehlisa izinkophe zakhe kancane, wayesethi ngokungemvelo: “Mnu. Wade, ngicela ukubala isamba semali esetshenzisiwe, nakanjani ngizokukhokhela uma ngithola ithuba! ”
UCharlie waqhweba isandla sakhe: “Phakathi kwami ​​nawe. Akudingeki ube nenhlonipho engaka. Ngiphinde ngibe ngumphathi wakho wesikhathi esizayo, ngakho-ke ngizokuthatha njengesipho sokuqala. ” UMelba waba namahloni ngokwedlulele futhi wacabanga ngaphakathi: “Kulungile ukunikeza izingubo njengesipho, kepha iziteki zikasilika nezingubo zangaphansi. Hlobo luni lwento… ”
Kepha ngemuva komunye umcabango, uma engasazabalazi, lolu daba luzophela manje, kepha uma kufanele abuyisele imali kuCharlie, lolu daba lulingana nokuthi alukapheli.
Ngale nto ebanga amahloni, ubefuna nje ukuyiphendula ngokushesha okukhulu, futhi angafuni ukuthola iziqubulo ezithile.
Ngakho-ke washesha wathi ngokubonga: “Njengoba uMnu Wade esho kanjalo, ngakho-ke angizukukuhlonipha.”
Ngemuva kokukhuluma, uphenduke ngokushesha wafihla izingubo ngasikhathi sinye. Phambilini wehlise ikhanda wabuyela esihlalweni.
Ngalesi sikhathi, uPollard wavula umnyango wathi ngokumamatheka: “Ngiye kobona, angazi ngempela ukuthi ngizokhetha ini. UMnu. Orvel wancoma izitsha ezimbalwa ezikhethekile, kodwa angiqiniseki ukuthi zikulungele yini ukuthanda ukudla. ”
UCharlie wamomotheka wathi, “Ukudla lapha kunambitheka kamnandi. Uma uzizwa ungathandeki, unga-oda enye into. ”
Njengoba esho, u-Orvel ungene namabhodlela amane oTshwala obuneminyaka engama-XNUMX ubudala eMoutai Liquor, ngenhlonipho. Wathi: “Master Wade noProfessor Watt, nina nobabili nizophuza la mabhodlela amane kuqala, futhi ngizoletha amanye uma ningenawo anele!”
UPollard washesha wathi: “Hawu, Mnumzane Orvel, anginabo utshwala obungako. Ngenkathi ngisemncane, ngangiphuza ikati noma kunjalo, futhi manje sekuyimisila eyisithupha noma eyisikhombisa. Ngaphezu kwalokho, le Moutai ineziqu eziphakeme. Ingxenye nje yamakati… ”
U-Orvel emoyizela wathi: “UProfesa Watt, yize lolu tshwala buphethe utshwala obuningi, kodwa ngeke uyeke ukubuphuza, ungabuvula uphinde uphuze ezinye izingilazi ezimbalwa!”
UPollard wayenesimo esihle ikakhulukazi, futhi waqhubeka wathi “Kulungile! Bese uphuza ezinye izingilazi! ”
UCharlie uzwe ukuthi uthathe isinyathelo sokuthululela uPollard ingilazi yewayini elimhlophe bese ezenzela yena, wabe eseyalela u-Orvel: “Mnu. Orvel, ungalungisela uMiss Watt iziphuzo ezithile. ”
U-Orvel sekusele kancane ayithole, uPollard uthe ngalesi sikhathi: “Melba, uCharlie ungumsindisi wakho, nawe ungaphuza, ukumenzela nje izinkomishi ezimbalwa!”
UMelba wanqikaza, wabe esevuma ngekhanda wathi, “Kulungile. Baba. ”
UCharlie uphuthume wathi: “UMelba akakaphumuli kahle okwamanje, ake sivumele u-Orvel athole ibhodlela lewayini elibomvu.” U-Orvel washesha wathi, “Kulungile Master Wade, sengiyahamba manje.”
UMelba Ebuka uCharlie ngokwazisa, uthe: “Mnu. Wade, ngizosebenzisa iwayini elibomvu ukukuhlonipha kamuva! ”
UCharlie wamomotheka: “Siyisizukulwane esisodwa, ngakho-ke ungabi nenhlonipho phakathi kwethu ngokuzayo, vele ungibize negama, kuzolunga.”
UMelba wanqekuzisa ikhanda kancane, wathi: "Kusukela manje, ngizokubiza ngoMongameli Wade emsebenzini, futhi ngizokubiza ngegama lakho ngasese."
UCharlie wamoyizela kancane wangasho lutho.
Ngemuva kokuthi u-Orvel ehambise iwayini elibomvu, uPollard wathatha ingilazi yewayini wathi kuCharlie: “Charlie, le ntombazane yami ukuphela kwegazi lami. Ngizokunikeza ingilazi noMelba, ngiyabonga ngomusa wakho osindisa impilo! ”
UCharlie wasukuma ngokushesha, wathatha ingilazi, wathi: “Malume uzimisele, ungasho ukuthi ngiyabonga, konke kukwiwayini.”
UPollard wavele wathi: “Yebo! Konke kukuwayini, woza, ngikwenze kuqala maqondana! ”
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2750 - 2751
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2754 - 2755